Uthumela Ubani I-imeyili? | Martech Zone
Uthumela Ubani I-imeyili?
ULwesihlanu, February 25, 2011 NgeSonto, uJanuwari 13, 2013 Douglas Karr
Umngane ungithumelele inothi namuhla mayelana nensizakalo ethokozisayo yokufaka imininingwane yabantu, yokuthenga kanye neyezwe ngokuhlu lwakho lwe-imeyili olubiziwe Injini Yokuxhuma. Isevisi ikuvumela ukuthi ufake amakhodi we-hash ohlwini lwakho lwama-imeyili ukuze ugcine amakheli akho e-imeyili evikelekile. Ulayisha amakhodi wakho we-hashi (ukhiye obethelwe osetshenzisiwe kukheli elihlukile le-imeyili) kusevisi futhi bafaka imininingwane.
Iningi labathengisi be-imeyili bamane banesithakazelo kulo Okuningi ababhalisile, kepha ungakunaki ukufaneleka yalezo ababhalisile. Ukuqoqwa nokuqhunyiswa kuyindlela yakudala futhi ngokuyisisekelo kugcina phansi i-imeyili yakho futhi kuholele kwizikhalazo eziningi, ukungazibhalisi namanani aphansi wokuchofoza nokuguqulwa. Ukukhomba ubuningi babantu abanabo wahlanganyela nawe kuzokuvumela ukuthi uyeke ukuqhumisa futhi uqale ukuhlukanisa uhlu lwakho. Ngokwenza umlayezo ofanele kube obhalisile ofanele, uzobona ukwanda okukhulu kokuguqulwa.
Sisebenzisa amakhodi we-imeyili we-hash aphephile, abethelwe ukufanisa amakhasimende akho ngamaphoyinti wedatha wangempela angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama-50 futhi masinyane sakhe iphrofayili eningiliziwe yesisekelo sakho sababhalisile. Mane nje ulayishe amakhodi wakho we-hash futhi kungakapheli imizuzu uzoba nokuqonda okuningiliziwe kumakhasimende akho kufaka phakathi ukubalwa kwabantu, izintshisekelo, indlela yokuziphatha kokuthenga, indawo nokunye okuningi. Ukusuka Injini Yokuxhuma indawo.
Kubonakala sengathi i-Connection Engine iphose zonke izinsimbi namakhwela futhi ikugcine lokhu kuyindlela elula, evikelekile yokufaka idatha. Ngiyabonga kakhulu lapho abantu begcina lezi zinsizakalo zilula kanjena! Babize ngo isivivinyo samahhala.
I-PPC iqhathaniswa ne-SEO: Spy vs Spy
Ingqungquthela Yokuphumelela Kwabezindaba Zomphakathi 2011
Mar 4, 2011 ku-8: 30 PM
Lokhu kungaba usizo olukhulu ekugcineni umkhondo wabangikhokhela. Kuzofanele ngizame lokhu.